Putin iyo Erdogan oo kawada hadlay xaalada Siiriya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Putin iyo Erdogan oo kawada hadlay xaalada Siiriya
Putin iyo Erdogan oo kawada hadlay xaalada Siiriya
August 28, 2019 - By: Hanad Askar
Madaxweynaha Turkiga Tayyib Erdogan ayaa Salaasadii shalay kulan magaalada Moscow kula yeeshay Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, labada hogaamiye ayaa ka wadahadlay xiriirka ganacsi, militari iyo xaalada wadanka Siiriya.
Erdogan iyo Putin ayaa weli isku khilaafsan arrimaha Siiriya, labada dhinac ayaa kala taageera xoogaga ku dagaalamaya dalkaasi.
Madaxweynaha Turkiga ayaa ugu baaqay Ruushka inuu cadaadis saaro xulafadooda dowlada Siiriya ee Bashar Al Assad inuu joojiyo duulaanka ay ciidamadiisa ku hayaan shacabka ku dhaqan gobalka Idlib oo ah gobalka ugu danbeeyey oo ay xoogaga mucaaridka Siiriya gacanta ku hayaan.
Turkiga iyo Ruushka ayaa sanadkii hore ku heshiiyey in gobalka Idlib aan lagu duulin, balse Madaxweynaha Ruushka Putin ayaa sheegay in kooxaha mucaaridka ee ku sugan gobalkaasi ay khatar ku yihiin amniga Siiriya isla markaana sii wadaan weerarada argagaxisada.
Putin ayaa ka codsaday in Erdogan uu wax ka qabto falalka ay ku kacayaan kooxaha ku sugan Idlib, Turkiga ayey ciidamo ka joogaan gobalkaasi.
Todobaadkii lasoo dhaafay ayey ciidamada Turkida ee ku sugan Idlib sheegeen in duqeyn lalal beegsaday kolonyo gaadiidkooda ciidamada, waxayna sheegeen in militariga Siiriya uu hareereeyey mid kamid ah saldhigyada ay ku leeyihiin gobalkaasi.
Dhinaca kale labada hogaamiye ayaa ka wadahadlay xiriirka ganacsi ee ka dhaxeeya, iyadoo ay dowlada Turkiga sheegtay inay daneenayso iibsiga qaar kamid ah diyaaradaha dagaalka ee Ruushka soo saaro, waxayna labada Madaxweyne ay shalay ka qeyb galeen bandhig loo qabtay diyaaradaha cusub ee militariga Ruushka soo saaro.
Qorshaha Turkiga ee iibsiga diyaaradaha Ruushka ayaa la filayaa inay markale ka careysiiso xulafada NATO oo uu dalka Turkiga xubin ka yahay.
Isbaheysiga NATO ayaa horey u cambaareeyey hubka gantaalada lidka diyaaradaha ee S-400 oo uu Turkiga kasoo gatay wadanka Ruushka oo ay u arkaan awooda kowaad oo uu loolanka kala dhaxeeyo.